Xog: Sida ay DF Soomaaliya u hor-istaagtay qorshihii Kenya Airways ee Hargeysa – Benaadir News Network
Xog: Sida ay DF Soomaaliya u hor-istaagtay qorshihii Kenya Airways ee Hargeysa
Muqdisho (Benaadir News) – Xog ay heshay Benaadir News ayaa daboolka ka qaadeysa sababta u weyn ee diyaaradda Kenya Airways ay u bilaabi laadahay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalada Hargeysa ee Somaliland, bilo kadib markii ay sidaas ku heshiiyeen Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi.
Shirkadda Diyaaradaha Kenya Airways ayaa qoraal ay maanta soo saartay ku sheegtay in duulimaadkii tooska ahaa ee Hargeysa uu weli ku jiro hakad, ayada ka gaabsatay faah-faahin intaas ka baxsan.
Sida ay Benaadir News u xaqiijiyeen xubno ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, sababta u weyn ee diyaaradda Kenya Airways u bilaabi laadahay duulimaadka tooska ah ee Hargeysa ayaa ah inay ogolaansho ka la’dahay wasaaradda.
Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa diiday inay diyaaradda Kenya Airways u ogolaato fasax ay ku tagto magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland, kadib markii ay su’aal gelisay hab macaamilka Kenya ee Somaliland.
“Anaga ayaa mamulna hawada Soomaaliya, mana jirto diyaarad iman karta garoon ka tirsan dalka, ayada oo aan fasax ka haysan dowladda federaalka,” ayuu yiri xubin sarre oo ka tirsan Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo la hadlay Benaadir News.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u aragta Kenya mid wada fowdo, maadama ay rabto inay Somaliland ula taacamisho sidii dal ka madax-banaan Soomaaliya, taasi oo ay ka biyo diidan tahay dowladda federaalka oo ayadu gacanta ku haysa maamulka hawada.
Shirkadda Diyaaradaha Kenya Airways ayaa maanta iska fogeysay warar sheegayay inay duulimaad toos ka bilaabi doonto magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland dhamaadka bishan aan ku jirno ee May.
Qorshaha ay diyaaradda Kenya Airways ugu tageyso duulimaad toos ah magaalada Hargeysa ayaa soo socday billooyinkii dambe, hase yeeshe waxa uu ka dhaqan gali laayahay dowladda federaalka oo u aragta xad-gudub ka dhan Jamhuuriyada.
Previous DF oo tallaabo ka qaaday Masjid iyo Imaam qaatay amar kasoo baxay Al-Shabaab
Next Kenya Airways oo war kasoo saartay duulimaadyo la sheegay inay ku tageyso Hargeysa